Tsika | Nhetembo - Detembai Titandare - Part 11
Ini tomu, kata, tende mumuchovha, Fambefambe, hwindi otanga kunyora, Tisati tati nepi, oshewedzera takwe, Pada anyumwa kuti handina nekobiri, Zvisina chinono, tsvi-i, chiriporipotyo!…
Manhungetunge manhungetungewo Haiwa manhungetunge Ndakanga ndaroyiwa Haiwa manhungetunge Nenzira yerudo, Haiwa manhungetunge …
Inhamo here yakadai, Inoita tidye zvakadai, Muriwo rudzii wakadai, Unenge madzihwa kudai! Remusango nguva yezhizha, Kana remapindu nyatando, Madomasi pamwe nehanyanisi, Madirativhange, tosanganisa….
Ndaneta kumhanyamhanya, Pfungwa dzave rushinga, Hana yaramba kugadzikana, Ndotswara hundi moyo kumakoto, Kamukwende taku, simu, tande, Kuchizororo kunopumhura! Hazvina kumira zvakanaka, Iyo yakwavarara…
Papata, inguva yaive yakaoma, Kuve jaya kana mhandara, Nhamo yefodya kurumwa nekutsva, Kuzvipedza kwauve kutoyambuka, Pungwe, kuenda Nyadzonya, Unozvipakatira rako wega gidi. Ukasadaro…
Ndarivana gangaidzwa mukwenyi, Mhezi yavavira mune wangu moyo, Chigagairwa, chiunu chinenge chego, Zvino ndongoumburuka siku rose, Mangu mupfungwa haazorori kumhanya, Kaguchu-kadende, zviuya muroora…
Ndewangu! Kwandakamuwana kachana, Kunosvika madhongi ave nenyanga, Gore rose ndichimupfimba, Gwevedzi kupedza rave neman’a! Nduma takapanana kwatete, Munyai nasamukuru ndakatuma, Handina chikwereti natezvara,…
Mwedzi wagara Wagara kuna dendere Dendere china mavara Mavara anenge edzetse Edzetse rakwira muzinda Mumuzinda kunoteya tsuro Teya tsuro nemubata mutsva Mubata mutsva…
Chave chinguva rabuda kumabvazuva, Zvino rorerekera kurowa nhongonya, Zvapindirana zuva nemwedzi, wagara, Watema pasi wamhura Musikavanhu, Chimotsi, yawe nguva yechisi! Nhasi mahakurimwe! Badza…
Havana zvizhinji zvinovanetsa, Kupinda vovana zvavanoda vobuda, Vakapakata papfudzi sahombarume, Kwete kusvorotenderera nhando, Takabva neko kumhunga hakuna’pwa. Panotsva ndebvu kudzimurana, Pasina kubvunzana twakavanda,…
Gerry on Ndoenda kwambuya